Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari oo dalkiisa dib ugu noqday kadib daaweyn caafimaad oo uu ku qaatay magaalada London - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari oo dalkiisa dib ugu noqday kadib daaweyn caafimaad oo uu ku qaatay magaalada London
March 10, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari oo dalkiisa dib ugu noqday kadib daaweyn caafimaad oo uu ku qaatay magaalada London. [Xigashada Sawirka: BBC]
Abuja-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa dalkiisa dib ugu noqday kadib muddo asbuucyo ah oo uu daaweyn caafimaad u aaday magaalada London ee wadanka UK iyadoo dhowr jeer laga dayriyay xaaladiisa caafimaad.
74-jirkan ayaa maanta oo Jimce ah ka degay garoon ay leeyihiin ciidanka cirka oo kuyaala magaalada dhanka waqooyiga kutaaala ee Kaduna waxaana la filayaa in uu u safro caasimada Abuja.
Faahfaahinta ku saabsan xaaladiisa caafimaad ayaan wali la ogeyn.
Bayaan rasmi ah oo shalay oo Khamiis ahayd la soo saaray ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Muhammadu Buhari uu uga yimid Nigeria nasasho iyo in uu maro tijaabo caafimaad.
Dalka Nigeria ayaa hadda wajahaya xilligii ugu xumaa ee qalalaase dhaqaale ee soo mara muddo sannooyin ah, taasoo dabasocotay hoos u dhaca sicirka saliida, oo ah wax soo saarka ugu weyn ee dalkaasi dhoofiyo.
Waa markii labaad wax ka yar sanad oo Madaxweyne Buhari uu arrimo caafimaad u aado dalka dibadiisa. Bishii June ee sanadkii lasoo dhaafay 2016-kii, waxa uu muddo ku dhow labo asbuuc ku bixiyay daaweyn caafimaad gudaha magaalada London. Buhari ayaa Madaxweyne loo doortay sanadkii 2015-kii.
May 3, 2017 Marwada kowaad ee Nayjeeriya oo sheegtay in Madaxweyne Buhari uusan u xanuunsanayn sida la mooday